'Kuthiwa akathakathwe owebe imali yeStokfela' | News24
'Kuthiwa akathakathwe owebe imali yeStokfela'
Durban - Ziyabhibha izinhliziyo zamalunga esitokofela saseNgonyameni eNgwavuma, ngemuva kokuba kubanjwe usikhwama wawo inkunzi waphucwa u-R112 000 nemoto, kubika iLANGA.
Amalunga alesi sitokofela asezokuba noKhisimusi omkhace ngenxa yokubhozonyelwa kukaMnu Skipas Ntshangase waphucwa le mali ngoMsombuluko ntambama kade ephuma ukuyoyikhipha ebhange edolobheni eJozini.
UMnu Ntshangase uthi kuthe eseyongena kwakhe - lapho amalunga esitokofela abemlinde khona kwavumbuka indoda esithubeni yamkhomba ngesibhamu, yamtshela ngesidlozana ukuba akhiphe yonke imali abeyoyikhipha ebhange.
OLUNYE UDABA:U-MMM uzama ukudoba abadlala izistokfela - Isikhulu
"Ngimangele sengivukelwa yindoda ingikhomba ngesibhamu ithi mangikhiphe imali engibuya nayo ebhange. Ngingakaphenduli, ingiyalele ukuba ngiphume emotweni. Emuva kwalokho lo mlisa ushaye wachitha nemoto yami.
"Okubuhlungu nje sebezoba noKhisimusi omubi abazali bethu nemoto kaMnu Ntshangase ihambile. Okubuhlungu wukuthi uNkulunkulu uyashesha ukuzwa ukukhala kwabafelokazi ngakho lo guluva makaqaphele angazitholi esekolukhulu utalatiya ngoba uzidonsele yena isiqalekiso," kusho ilunga lomphakathi elinxuse ukuba lingadalulwa.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe kuvulwe amacala mayelana nokubamba inkunzi lapho kuthathwe khona imali nomakhalekhukhwini.
"Amaphoyisa aseNgwavuma aphezu kophenyo, kuvulwe amacala ngalesi sigameko. Konke lokhu kwenziwe ngumlisa obehlome ngesibhamu ekhombe isisulu ngaso maqede washaya wachitha nemoto nemali," kuphetha uCapt Gwala.